पुरानाे मेडिकल कलेजमा कजेलाे प्रत्याराेपण पुनः शुरू « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 12 June, 2019 7:22 pm
चितवन । चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज) टिचिङ अस्पतालमा लामो समय पछि मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । करिब चार वर्ष अघि नै लाइसेन्स् पाएको कलेजले त्यति नै समयको अन्तरालमा तेस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो ।
सोमवार प्राडा राकेश बर्माको टोलीको साढे तीन घण्टा लगाएर भक्तपुर-६ का ५४ वर्षीय विष्णुगोपाल बतासको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो । उनलाई २५ वर्षीय आफ्ना भान्जा रिजनवीर जोशीले मिर्गौला दिएका हुन् । ‘७२ घण्टा भयो, प्रत्यारोपण भएकाे बतासको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ, हामी खुशी छौं,’ डा बर्माले भने ।
याे प्रत्यारोपण पछि उत्साहित भएका डा. बर्माले पुरानो मेडिकल कलेजमा मिर्गौला प्रत्यारोपणले नियमितता पाउने दावी गरे । उनले आफूले अब पुरानो मेडिकल कलेजबाट सेवामा निरन्तरता दिने बताए । ‘मैले अब यता नै निरन्तरता दिन्छु । म यता आवद्ध भएर नै यो सेवा सुरु भएको हो,’ डा बर्माले भने ।
यसअघि उनी भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत थिए । भरतपुरमा पनि कलेजो प्रत्यारोपणकाे तयारी भएको डा.बर्माकाे भनाइ छ ।
प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले उपत्यका बाहिर प्रत्यारोपण शुरु हुनु राम्रो कुरा भएको बताए । उनले आफ्नो अस्पतालको टोली गएर पुरानो मेडिकल कलेजमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल गराएको जानकारी पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
‘पुरानो मेडिकल कलेजमा अस्ति भएको प्रत्यारोपणमा डा. बर्मासहित अधिकांश डाक्टर हामीकहाँ ट्रेन्ड भएकाहरु नै हुनुहुन्छ । अब सुमेरु अस्पतालमा पनि हामीकहाँ ट्रेन्ड भएका डाक्टरहरु जानु भएको छ । त्यसैले प्रत्यारोपण केन्द्रमा काम सिकेर सेवा विस्तार गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा पनि भएन,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
प्रत्यारोपण केन्द्र एकेडेमी जस्तो भएको डा. श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।